Home Wararka Dibada Badri Cabdicasiis Saalax, ninka Maraykanka hal milyan dul dhigeen oo lagu qabtay...
Badri Cabdicasiis Saalax, ninka Maraykanka hal milyan dul dhigeen oo lagu qabtay xadka Soomaaliya
Mid ka mid ah labadii nin ee baxsadka ahaa ee uu Mareykanku ku raadjoogay loona haystay ka ganacsiga daroogada iyo ugaarsiga duurjoogta ayaa la xiray, sida uu qoray wargeyska Nation ee ka soo baxa dalka Kenya.
Badru Cabdul Casiis Salax ayaa laga soo qabtay deegaanka Liboi ee ismaamulka Garissa xili uu doonayay inuu u gudbo dhanka Soomaaliya, sida laga soo xigtay ilo ka tirsan booliska.
Qabashada ninkan ayaa ku soo beegmaysa afar maalmood uun ka dib markii Agaasinka Danbi baarista iyo Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ay soo bandhigeen sawirkiisa, kaas oo si weyn loogu faafiyay warbaahinta.
Balse waxaa ay booliiska wali ku raadjoogaan, Cabdi Xuseen Hussein Axmed oo ay wada socdeen Saalax
Mr Saalax ayaa waxaa lagu hayaa xarunta lanta la dagaalanka argagixisada, halkaasi oo ay dambi barayaasha ay ku waydiinayaan su’aalo la xiriira xiriirka uu la leeyahay Mr Axmed, halka uu ku sugan yahay iyo waxa uu dalka ka hayo.
Safaaradda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore u yaboohday 1 milyan oo doolar cidii keenta xog kasta oo horseedi karta in la soo qabto Mr Saalax oo lagu eedeeyay ka ganacsiga maandooriyaha.
Taksiile daacad ah oo abaalmarin la siiyay
Sawirka xero qaxooti oo ku guuleystay abaalmarin tartanka sawirada cuntada
Sababta uu madaxweynahan ugu guulaystay abaalmarin $5 milyan oo doollar ah!
Qaabkii loo soo qabtay ayaan faahfaahin laga bixin islamarkana ma cada in ay jirto cid qaadatay abaalmarintii uu Mareykanak ballanqaaday.
Balse safaaradda Mareykanka ayaa maanta xaqiijisay qabashada ninka baxsadka ku jiray, waxayna shacabka ku ammaantay inay gacan ka geysteen soo qabashada.
Bayaan ay soo saareen, mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xog ay ka heleen shacabka ay ku howlgaleen laamaha dambi baarista Mareykanka iyo kuwa Kenya oo iskaashanaya ay Isniintii soo qabteen Saalax.
“Mr Saalax waxa uu ku jiraa xabsiga Nairobi. Xogta lagu soo qabtay Saalax waxa ay jawaab u tahay 26-kii May ee lagu dhawaaqay in abaal-marin lacageed lagu raadinayo macluumaad horseedaya in la xiro, lana maxkamadeeyo Saalax iyo Cabdi Xuseen Axmed,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka
Previous articleSouth Sudan: Lax lagu xukumay saddex sano oo xarig ah kadib markii ay ‘dishay’ haweenay!
Next articleMaxaa ardayda jaamacada Afrika looga reebay barnaamijka fiiso la’aanta UK?
Kenya Oo Shaacisay Xilliga La Saxiixayo Hesiiska Qaadka Ay Usoo Dhoofiso...
Ergayga gaarka ah ee arrimaha bini’aadannimada iyo gargaarka oo kulan la...
Liverpool Oo Doonaysa Saxiixa Xiddiga Marco Asensio